ဖိနပ်တွေကို အလစ်သုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတုန်း CCTV ကိုမြင်လို့ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ မိန်းကလေးနှစ်ယောက် - Lifestyle Myanmar
ဖိနပ်တွေကို အလစ်သုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတုန်း CCTV ကိုမြင်လို့ ထွက်ပြေးသွားတဲ့ မိန်းကလေးနှစ်ယောက်
တချို့တိုက်ခန်းနေသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့စျေးကြီးတဲ့ ဖိနပ်တွေကို အခန်းထဲထည့်ထားလေ့ရှိကြပြီး အချို့ကတော့ ဖိနပ်အနံ့ကိုမခံနိုင်လို့ အပြင်မှာပဲ ချွတ်ထားတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုအပြင်မှာချွတ်ထားတာဟာ တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အချိန်မရွေး ခိုးယူဖို့လက်ယက်ခေါ်နေသလိုပါပဲ။ ယခုအဖြစ်အပျက်ဟာ စင်္ကာပူနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပြီး ဖိနပ်တွေကို ခိုးယူဖို့ကြံတာဟာလည်း စင်္ကာပူနိုင်ငံသူနှစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
1st video Happened on Saturday night, these2brave young ladies seems to be brazenly choosing which lucky shoes and flip flops they would like for their cinderella journey to prison. Well take your time to choose. Help me spread the words ya
Gepostet von Nur Ashiqin Muhammad Kyaizam am Sonntag, 7. Juli 2019
ယခုဗီဒီယိုနှစ်ခုကို ဖေ့ဘွတ်မှာတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဗီဒီယိုမှာတော့ အဆိုပါမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဟာ ဖိနပ်ဆိုင်ရောက်နေသလိုပဲ အခန်းရှေ့မှာထားတဲ့ သူများရဲ့ဖိနပ်တွေကို သေသေချာချာဆွဲထုတ်ပြီး ရွေးယူနေတာပါ။
လူသံကြားတဲ့အတွက် ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီး သိပ်မကြာခင်ပဲ မိန်းကလေးတစ်ယောက်က ပြန်လည်ခိုးယူဖို့ ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီး သူမရဲ့အဖော်ကို လူရှင်းကြောင်းအချက်လှမ်းပြရင်းနဲ့ CCTV တပ်ထားတာကို မြင်တွေ့သွားခဲ့တာကြောင့် မျက်နှာကိုလက်နဲ့အုပ်ပြီး ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။
2nd video Happened on Saturday night, these2brave young ladies seems to be brazenly choosing which lucky shoes and flip flops they would like for their cinderella journey to prison. Well take your time to choose. Help me spread the words ya
ယခုအဖြစ်အပျက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဗီဒီယိုကို တင်ခဲ့တဲ့သူကတော့ cinderella journey to prison စင်ဒရဲလားရဲ့ ထောင်သို့ခရီးစဉ်ဆိုတဲ့ စတေးတပ်နဲ့ တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဖိနပ္ေတြကို အလစ္သုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတုန္း CCTV ကိုျမင္လို႔ ထြက္ေျပးသြားတဲ့ မိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္
တခ်ိဳ႕တိုက္ခန္းေနသူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ေစ်းႀကီးတဲ့ ဖိနပ္ေတြကို အခန္းထဲထည့္ထားေလ့ရွိၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဖိနပ္အနံ႔ကိုမခံႏိုင္လို႔ အျပင္မွာပဲ ခြၽတ္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုအျပင္မွာခြၽတ္ထားတာဟာ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို အခ်ိန္မေ႐ြး ခိုးယူဖို႔လက္ယက္ေခၚေနသလိုပါပဲ။ ယခုအျဖစ္အပ်က္ဟာ စကၤာပူႏိုင္ငံမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ျဖစ္ၿပီး ဖိနပ္ေတြကို ခိုးယူဖို႔ႀကံတာဟာလည္း စကၤာပူႏိုင္ငံသူႏွစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုဗီဒီယိုႏွစ္ခုကို ေဖ့ဘြတ္မွာတင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဗီဒီယိုမွာေတာ့ အဆိုပါမိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္ဟာ ဖိနပ္ဆိုင္ေရာက္ေနသလိုပဲ အခန္းေရွ႕မွာထားတဲ့ သူမ်ားရဲ႕ဖိနပ္ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာဆြဲထုတ္ၿပီး ေ႐ြးယူေနတာပါ။ လူသံၾကားတဲ့အတြက္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ၿပီး သိပ္မၾကာခင္ပဲ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္က ျပန္လည္ခိုးယူဖို႔ ျပန္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး သူမရဲ႕အေဖာ္ကို လူရွင္းေၾကာင္းအခ်က္လွမ္းျပရင္းနဲ႔ CCTV တပ္ထားတာကို ျမင္ေတြ႕သြားခဲ့တာေၾကာင့္ မ်က္ႏွာကိုလက္နဲ႔အုပ္ၿပီး ထြက္ေျပးသြားခဲ့ပါတယ္။ ယခုအျဖစ္အပ်က္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့စေနေန႔က ျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဗီဒီယိုကို တင္ခဲ့တဲ့သူကေတာ့ cinderella journey to prison စင္ဒရဲလားရဲ႕ ေထာင္သို႔ခရီးစဥ္ဆိုတဲ့ စေတးတပ္နဲ႔ တင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
အရက်တွေဘီယာတွေ သောက်ပြီးသွားရင် ကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်တတ်တဲ့ အမူအကျင့်တွေကို သတိထားမိကြလား? တချို့ကျတော့မသောက်ခင်က အငြိမ် သောက်ပီးရင်တော့ သူ့လောက်ပျော်တတ်တာ စကားများတာ မရှိတော့ဘူး။ တချို့ကျတော့ သဘေ ာကောင်းစိတ်ကောင်းရှိတယ် မသောက်ခင်က မူးပီလည်းဆိုရော စူပါမန်းလိုလို ပါဝါရိန်းဂျားလိုလိုဖြစ်သွားတတ်ရော..ဒါကြောင့် မူးလာရင် လူတွေဖြစ်တတ်တဲ့...
ဖြတ်ထိုးဉာဏ်ကောင်းတယ်ဘဲပြောရမလား၊ သူများနဲ့မတူတဲ့ အတွေးအခေါ်ရှိတယ်လို့ဘဲဆိုရမလား။ ဘာဘဲပြောပြော ကလေးတွေအဖြေက လုံးဝကို ရှု့ထောင့်အသစ်တစ်ခုဖြစ်နေတာတော့ အမှန်ပါဘဲ။ သူတို့ဆရာတွေကတော့ တကယ်တော်တဲ့ကလေးတွေလို့ မှတ်ချက်ချရမလို စိတ်ဆိုးရမလိုဖြစ်နေမှာ။ သူတို့ဖြေထားတာလေးတွေက လူကြီးတွေဘယ်လိုမှ တွေးမိမှာမဟုတ်တာတွေလေ။ ကွာခြားချက်ကတော့ " 8 " ကခွေခွေလေး၊...
ယောင်္ကျားလေးတွေအပေါ်မှာ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့် စိတ်ဝင်စားမှုကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖော်ပြခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးတွေက သမိုင်းမှာ ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းခံကြရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုပရောပရည်အနုပညာက မွေးဖွားလာခဲ့တယ်။ ဆန်းပြားတဲ့ ကိုယ်ဟန်အမူအရာ၊ မျက်နှာအမူအရာနှင့် ထိတွေ့မှုတွေရဲ့ အကူအညီနဲ့ အမျိုးသားတွေရဲ့ အာရုံကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ချစ်စရာ coquetteက...